Kuthetha inyaniso, bathi, abantwana bayintyatyambo yobomi bethu bonke. Ngaphandle kokunciphisa ubunzima obujongene nabo bonke abazali, kukhuselekile ukuthetha ukuba abantwana bawona mhle kunabo bonke ubomi bethu. Oku kungathandabuzekiyo, kwaye akukho nto yokuthetha ngayo ngale nto, njengokuba ngamnye wethu uneliseko lwakhe lokuzala. Kodwa ukuthetha ngeengxaki ezinokuchaphazela abazali ubuncinane into ebalulekileyo. Ngoko, umxholo wendaba yethu yanamhlanje ngu: "Indlela yokuziphatha kubazali xa umntwana omdala enomona omncinci? ". Njengoko uyakubona, le mpapasho inxulumene nalabo abaneemibini (okanye ngaphezulu) abantwana abaneminyaka ehlukeneyo. Abo bajamelana nomona wabantwana baza baqonda ukuba kunzima kangakanani ukusombulula le ngxaki.
Indlela yokuziphatha kumzali, xa umntwana omdala ekhwele umncinci nonina noyise? Yintoni endingayithethayo, yintoni endiyenzayo ukuba ndiyicime loo mvakalelo engadingekile kwaye ndivuselele uthando nothando ukuba lizalise elidala?
Ndicinga ukuba kufuneka uqalise ixesha elide ngaphambi kokuba ulethe ityumbane encinane kwisibhedlele ukuya kwindlu eyenza i-squeak. Ngokuqinisekileyo ucele umntwana wakho omdala-ngaba ufuna umzalwana okanye udade? Ukhumbule ukuba umntwana wakho omdala uphenduliwe kuwe? Uze uchukumise umgca wakho wokuziphatha ngokuthe ngqo kwimpendulo yakhe.
Ukuba umntwana uthe uya kuvuyela udade okanye umzalwana-into enhle kakhulu, ishishini lakho akuvumelekanga ukuba umntwana adideke kule phupha, ukuba angayivumeli. Ngokukhawuleza xa ufumana iindaba ezivuya malunga nokukhulelwa - xelela omdala ukuba, umzekelo, udadewabo (okanye umzalwana) wabiza waza wathi uya kuzalelwa kungekudala. Ukuqwalasela ngononophelo impendulo yomntwana - akazange athukuthele? Ngangoko unako ukumxelela ngokuvuyisa ukuba xa umntwana wesibini evela kwintsapho, uya kuba nethuba elihle lokudlala naye kwimidlalo eyahlukeneyo! Uya kuba nomhlobo wenene oya kuhlala ekhona.
Ukuba usuvele uyayazi ngesondo lomntwana ozayo - ungadlala kuyo. Intombi endala iya kuba noodade? Kulungile, ekugqibeleni uya kuba nomntu odlala kunye needodoli, ekugqibeleni umntu uya kumnceda ngokufanelekileyo ukuxhobisa indlu yedodoli! Bonke baya kupheka ukutya kwisitya sokudlala, baze batye uyise nonina. Ukuba umzalwana ulindeleke - naye ulungile, umkhuseli omkhulu kunye onamandla uya kukhula kuye, ongeke avumele udadewabo omncinci ukuba akhuphe!
Ukuba umntwana omdala uyinkwenkwe, ndicinga ukuba akayi kuba neengxaki nomntakwabo. Emva koko, umzalwana mkhulu, ngumdlalo weemoto zokugibela, ukuloba, iibhasikidi, iingqungquthela kunye nokunye okuninzi! Mhlawumbi akasetyenziswanga ngcamango yokuba uya kuba noodade - unokucinga ukuba intombazana enentsapho iyamkhathaza. Unokuhlala uxabana naye, uqinisekile ukuba ungadlala ibhola nentombazana nentlanzi, kwaye ngaphandle koko, ngubani oya kumkhusela, umncinci? Abafana bathanda xa abazali becinga ukuba banamandla kwaye bazimeleyo.
Zonke ezi ngxabano zimele zithembeke ngakumbi emlonyeni wakho ukuba umntwana omdala engafuni udade okanye umzalwana-ufuna ukulawula ngokupheleleyo abazali bakhe kwaye bangabelani uthando lwabo nabani na. Ukuziphatha kwabazali kule meko kufuneka kube mnene kakhulu, kucoceke, ukuze igama elingehlelwa libi lingenzi imeko. Ungalibali ukuthetha ukuba uyamthanda kwaye uya kuhlala uyithanda, kwaye ngaphandle koko, awukwazi ukujamelana nomntwana omncinci ngaphandle koncedo lwabadala. Makhe azive ukuba uyamdinga nje ngaphambili, ukuba uyamthanda kwaye akayi kukuyeka ngenxa yentsana entsha. Musa ukumnika izipho - oku akuyithathi indawo yokufudumala komzali. Ininzi idla ngokubambisana, umqhube kwiindawo zokuhlala kunye nokutshintsha, undixelele ngokukhawuleza ukuba uya kuhamba apha emithathu, kwaye umdala uya kubonisa umncinane kunabo bonke-zonke izilwanyana kwi-zoo.
Hlela iseshoni "zokunxibelelana" zomntwana omdala kunye nomncinci kumsane. Makhe azive zakhe iipiniki, kwaye uvakalise ukuba lo mzalwana okanye udade ozayo uza kudlula umntwana!
Xa umntwana ezalwa, ngokuqinisekileyo, phantse yonke ingqalelo yabazali baya kukhankanywa kuye. Kubalulekile apha ukuba ungammiseli umntwana omdala eceleni, njengoko kuya kumlimaza ukuba aphile. Yibambelele ekunakekeleni umntwana, sinike imisebenzi eyenzekayo: umzekelo, khetha iingubo zokugqoka, uhlambe iimathoyizi zakhe, ukhethe ibhotile esitolo kunye nokunye. Vumela ukutyana, ukumanga umntwana kwaye ungenzi naluphi na ukuhlaselwa okukrakra, ukuba umntwana okhulileyo wenza into engafanelekanga. Emva kwayo yonke into, inkwenkwe ikhusele umntwana omncinci xa evakalelwa ukuba engabonakaliyo. Ungamvumeli umntwana omdala ukuba abe naloo mvakalelo!
Okokuqala, xa umntwana omncinci efuna umama, mvumele uyise achithe ixesha kunye nomdala, hambani kangangoko kunokwenzeka kwaye mxelele yonke into. Kodwa ngamanye amaxesha umama kufanele akwazi ukushiya umntwana kunye noyise - kwaye asebenzise lonke usuku kunye nosana oludala, kuba ngoku akanalo uthando olungumama!
Ngaba uke wambona ukuba abantwana abadala abakhukhulayo bahamba ngesitulo sabakhubazekile kunye nomntakwabo omncinane (udade) epaki? Ewe, bavele bavule ngovuyo, ngenxa yokuba baphathiswe lo xanduva, ekubeni bangabonakalisa ihlabathi elitsha kubantwana abafika kuyo!
Kwaye banomdla kangakanani ukuba bachaze injongo yalezi zixhobo, izinto? Yonke le nto imele ufundise umntwana omdala, mxelele ngothando-yintoni indima enkulu ebomini yesibini edlala naye! Yaye umntwana uya kuthandana njani xa yena engesabi ukumnika uthando nokunyamekela ...
Yinyani ngokunyanisekileyo kunye nosana lwakho lwesibini. Ukuba akayiqondi isizathu sokuba ungeke uzinikele ixesha elingakumbi kuye, mxelela nje ukuba omncinci usabuthathaka kakhulu, akanakunqothuka emathunzini akhe, kwaye umsebenzi wakhe wosapho uncedo kuye.
Naliphi na xa uthenge ithoyizi ngemvumba esitolo - ungayikhohlwa ngomntwana okhulile, uya kuvuya kakhulu xa umnika isipho esincinci ukuya kuqala - kufuneka ukuba ngamanye amaxesha abe ngowokuqala!
Eyona nto ibaluleke kakhulu - ukuchaza ukuba intsapho ayinayo yokuqala kunye yesibini, akukho nabathandekayo nabathandekayo abangakumbi, kodwa kukho abo bantu bafuna uncedo lomnye! Yaye ukuba baziva le nkxaso, intsapho iya kwomelela imihla ngemihla, kwaye inxalenye nganye iya kuzaliswa ngovuyo novuyo!
Ukuphuhlisa iikhathuni zomncinci
Itheyetha yemidlalo yasekhaya, uNew Year, umbhalo
Iipancakes kwi matzoni
UDana Borisova wachaza okokuqala ngesipho esivulekileyo esivela kwintlekele yengozi
I-cherry cherry i-compote kunye nethambo kwaye isilungele yonke imihla kwi-pan ne-multivark
Amacandelo okulungisa abantu ngobuso bombuso
Ukufudumala kuholele ekubetheni kunye nokuvuvukala kwemiphunga
Isaladi evela kwiScack
Intlanzi e bhaka